कसरी बच्ने काेराेनाबाट ? लकडाउन त खुकुलाे भयाे – Khabar PatrikaNp
कसरी बच्ने काेराेनाबाट ? लकडाउन त खुकुलाे भयाे
July 21, 2020 93
जनजीवनका नियमित कामकाज गर्न मिल्ने गरी सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाइसकेको छ । निजी गाडी जोर–बिजोर प्रणालीमा र भौतिक दूरी कायम हुने गरी सीमित यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधनसमेत सञ्चालन गर्न सरकारले दिइसकेकाे छ । साथै अत्यावश्यक व्यवसायसमेत सरकारले खुला गरिसकेको छ । तर कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहेकाले बच्ने उपाय पालना गर्न पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई दैनिक अनुरोध गरिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मानिसको आवतजावत बढिरहेको छ । जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सजग भएर आफ्ना दैनिक कामकाज गर्न विशेषज्ञको सुझाव छ । हरेक व्यक्ति तथा संस्थाले राम्रोसँग सुरक्षाका नियम पालना गरे मात्र कोरोनाबाट बच्न सकिने चिकित्सक बताउँछन् ।
‘अहिले पनि लकडाउनमा जस्तै नियम पालना गर्न आवश्यक छ । भिडभाडमा नजाने, कसैलाई भेट्दा २ मिटर टाढै बस्ने, भिडमा जानै परे भरपर्दो मास्क प्रयोग गर्ने र कुनै वस्तु छोएपछि साबुनपानीले २० सेकेन्डसम्म मिचीमिची हात धुने गर्नुपर्छ।’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार लक्षणबिना पनि मानिस कोरोना संक्रमित हुने र अरूलाई सार्न सक्ने भएकाले सबैले पूरा नियम पालना गर्नुपर्छ । संक्रमित व्यक्तिले चर्को बोल्दा, खोक्दा कोरोना सर्ने भएकाले यसमा अत्यन्त होसियारी अपनाउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनका यात्रु तथा सञ्चालक दुवैले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने डा. बास्तोला बताउँछन् । सार्वजनिक गाडीमा चढ्दा मास्क लगाउने, २ मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने, हरेक यात्रुलाई सेनिटाइजर लगाउन दिने र सहचालक बोल्दा पहिलाजस्तो बेस्सरी नकराउनेजस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी कम्पनी/कार्यालयले कर्मचारी/ग्राहक प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूको ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गराउने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, ज्वरो आएका तथा रुघाखोकी लागेका कर्मचारीलाई काममा नलगाउने गर्नुपर्छ । यस्तै पछिल्लो अनुसन्धानले हावाबाट समेत कोरोना सर्न सक्ने देखिएकाले कार्यालयका कोठा राम्रोसँग हावा ओहोरदाहोर हुन सक्ने भेन्टिलेसनयुक्त हुन जरुरी छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुन सार्वजनिक सवारीसाधनमा कोरोना फैलिन नदिन चालक/सहचालक र यात्रु दुवै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । सरकारको आँखा छलेर टनाटन यात्रु कोच्ने यातायात सञ्चालक तथा जसरी पनि पुग्नुछ भनेर कोचाकोच गरेर चढ्ने यात्रु दुवैले आफ्ना बानी सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कतै जानुछ भने बरु अलि अघि नै निस्किने तर खालि बस पर्खेरै जाने बानीको विकास गर्न जरुरी छ,’ डा.पुनले भने ।
यसरी यात्रु र बस सञ्चालक दुवै पक्षले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे/नगरेको नियमित अनुगमन प्रहरीले गर्नु उत्तिकै आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण नभएसम्म र यसको स्थायी उपचार विधि पत्ता नलागेसम्म प्रहरी सार्वजनिक यातायात तथा अन्य सेवाप्रदायक स्थलमा चनाखो हुुनुपर्छ,’ डा.पुनले थपे ।
सार्वजनिक गाडीमा चढ्दा मास्क लगाउने, २ मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने, हरेक यात्रुलाई सेनिटाइजर लगाउन दिने र सहचालक बोल्दा पहिलाजस्तो बेस्सरी नकराउनेजस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने चिकित्सककाे सुझाव छ ।
यी दुवै पक्षभन्दा बढी चनाखो हरेक नागरिक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सहचालकले पहिलाजस्तो ठूलो स्वरले यात्रु बोलाउनु भएन, बसको चुकुल, डन्डीमा संक्रमित व्यक्तिले छोएपछि ३ घण्टासम्म भाइरस जीवित रहन सक्छ, पटक–पटक यस्ता स्थान सेनिटाइज गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।
गीत गाउँदा, भाषण गर्दा र नारा लगाउँदा मुखबाट निस्कने छिटाबाट कोरोना सर्न सक्ने भएकाले यस्ता गतिविधि पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नजिकै बसेर गीत गाउने गर्दा, हड्ताल गर्दा पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ,’ डा.पुन भन्छन् ।
तर लक्षण नदेखिएका संक्रमितबाट कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना लक्षण देखिएकाको तुलनामा कम हुन्छ । लक्षण भएका संक्रमितले खोक्दा भने टाढैबाट पनि संक्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तै कसैको जुठो नखाने, अंकमाल नगर्ने, गुम्म परेको कोठामा नबस्नेजस्ता नियम पनि पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
उनीहरूका अनुसार कुनै पनि सतह तथा शंकास्पद ठाउँ, शौचालय/भ¥याङका डन्डी/चुकुल, टेबुल, सोफा आदि छोएपछि साबुनपानीले राम्रोसँग हात नधोईकन त्यो हातले आँखा, नाक तथा मुख नछुने बानी बसाउनुपर्छ ।
जबसम्म कोभिड–१९ विरुद्ध औषधि तथा खोप बन्दैन, तबसम्म यसको जोखिम कायमै रहने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । भिडभाडमा जाँदा नै बढी संक्रमण फैलिने कुरा अनुसन्धानले देखाएको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले त्यस्ता ठाउँमा सकेसम्म नजान सुझाव दिए । नियमित पे्रस ब्रिफिङका क्रममा डा. गौतमले भने, ‘दैनिकी चलाउन मात्र लकडाउन खुकुलो गरिएको हो, सार्वजनिक स्थल, बैंक, अस्पतालमा बिस्तारै भिडभाड बढ्दै गएकामा हामी चिन्तित छौं ।’ कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जारी रहेकाले घरबाहिर निस्किनु परे यसबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न उनको सुझाव छ ।
डा. गौतमका अनुसार अहिले पनि लकडाउनमा जस्तै नियम पालना गर्न आवश्यक छ । भिडभाडमा नजाने, कसैलाई भेट्दा २ मिटर टाढै बस्ने, भिडमा जानै परे भरपर्दो मास्क प्रयोग गर्ने र कुनै वस्तु छोएपछि साबुनपानीले २० सेकेन्डसम्म मिचीमिची हात धुने गर्न डा.गौतमको सुझाव छ ।
Prevचाँडो महाधिवेशन गरेर ओलीलाई हटाउने, प्रचण्ड र नेपालबीच सहमति
Nextस्थानीय तहको निगरानीमा १४ दिन होम क्वारेन्टिन विदेशबाट आउनेलाई
साढे ४ बजे खुलामञ्चमा खानेको यस्तो लाइन सहयोगी हातहरुलाई सलाम
‘हामी खतरामा छौं’ भनेर दम्पत्तीले फोन गर्दा समयमै पुगेन प्रहरी : श्रीमतीको ज्यान गयो, श्रीमान गम्भिर
अण्डा पहिले कि कुखुरा ? यो बहस कहिल्यै टुंगिँदैन तर अण्डा होइन बच्चा नै जन्माएपछि
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29770)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28431)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27866)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24708)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22297)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20987)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15615)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14964)